Home Wararka Xaalad cakiran oo ka jirta Xalane iyo Xildhibaanada qaar oo ku xayiran...
Xaalad cakiran oo ka jirta Xalane iyo Xildhibaanada qaar oo ku xayiran albaabka hore
Qaar kamid Xildhibaanada gollaha shacabka ee Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa goordhaw gaaray teendhada Afisiyooni oo lagu wado in ay ka dhacdo doorashada guddoonka gollaha shacabka ee Baarlamaanka federaalka.
Xildhibaanada gaaray teendhada Afisiyooni ayaa tiro ahaan aad u yar, waxaana la filayaa daqiiqadaha soo aadan in teendhada Afisiyooni gaaraan xildhibaano hor leh oo katirsan Xildhibaanada gollaha shacabka. Waxaa halkaas haatan ka taagan xaalad aad u cakiran oo ay ka dhalan karto gacan ka hadal.
Sida aan wararka ku heleyno ciidamo katirsan booliiska Soomaaliya oo ka amar qaata Farxaan Qaroole ayaa xirtay waddooyinka gala teendhada Afisiyooni, ciidankaasi ayaa la sheegay in Xildhibaanada qaar waddooyinka ka celinayaan.
Xildhibaanada cusub gaar ahaan kuwa aan wadan ilaalada badan ayaa wararku sheegayaan in lagu handado waddooyinka qaar dibna loo celinayo, waxaana ujeedka ciidankan la sheegay in uu yahay in doorashada baaqato iyaga oo fulinaya rabitaanka Villa Soomaaliya.
Xil: Maxamed Abuukar Jacfar oo katirsan xildhibaanada gollaha shacabka ayaa ugu baaqay Xildhibaanada guryahooda jooga in ay yimaadaan teendhada Afisiyooni , waxa uuna sheegay in rejo wanaagsan ka qabaan in maanta doorashada dhacdo.
Doorashada guddoonka gollaha shacabka ayaa weli ku jirta xaalad hubanti la’aan ah, waxaana socda shirar uu hormuud u yahay Ra’isul Wasaare Rooble oo xal loogu raadinayo qabsoomida doorashada guddoonka gollaha shacabka.
Previous articleTaiwan pledges US$500,000 to help victims of Somaliland fire
Next articleMaraykanka oo ka gaabsaday inuu taageero in Xildhibaanada Ceelwaaq ka qaybgalaan doorashada
Alshabaab oo xoog kula wareegay deegaano hoos taga Gobolka Jubada hoose
Farmaajo oo ciidan diray & Ciidamada Jubbaland oo heegan buuxa lageliyay